Ankoatra ny polisy am-perinasa iray: mpiasan’ny Brinks roa lahy tao ambadik’ilay fanafihana | NewsMada
Araka ny fanazavan’ny polisin’ny Brigade criminelle, mpiasan’ny orinasa Brinks roa lahy efa voaroaka sy polisy am-perinasa iray, ary mpitondra taxi iray, no tafiditra ao anatin’ilay fanafihana ny fiarakodia mpitondra vola an’ny Brinks, teny Amoronakona, By-Pass, ny asabotsy lasa teo. Samy efa voasambotry ny polisy avokoa izy ireo.
Ifaninanan’ny polisy sy zandary ny fanadihadiana sy ny famotorana mikasika ilay raharaha fanafihana fiara mpitondra vola an’ny orinasa Brinks, teny Amoronakona, By-Pass, ny asabotsy lasa teo. Raharaha hafa mikasika fanjavonana olona sy asan-jiolahy ny niandohan’ny famotoran’ny polisin’ny Brigade criminelle, Anosy ny alahady 14 avrily lasa teo, kanjo niafara sy nifandray amin’ity raharaha fanafihana fiaran’ny Brinks ity. Araka izany, olona dimy no fantatra, nandritra ny valandresaka nifanaovan’ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny fikarohana heloka bevava eo anivon’ny polisim-pirenena (SCAC), ny Commissaire principal de police, i Seraly Hercule, fa efa voasambotra. Tonga nanatona ny polisy ny renim-pianakaviana iray nilaza ny tsy fahitany ny vadiny, nanomboka ny alahady 14 avrily 2019 alina teo. Rehefa nanao ny fanadihadiana momba io tranga io ny polisy, fantatra fa ny iray amin’ireo jiolahy roa voatifitra teny Amoronakona By-Pass, nandritra ny fanafihana ny fiaraben’ny orinasa Brinks nitondra vola saika harotsaka amin’ny Dab amin’ny banky iray eny an-toerana, ny vadin’io ramatoa voalaza fa tsy hita io. “Nitohy ny fikarohana ka nahazo angom-baovao marim-pototra ny polisy izay nahalalana ny trano sy ny toeram-piafenan’ireo naman’ity jiolahy voatifitra ity. Voaporofo nandritra ny fanadihadiana ary nambaran’ireo jiolahy voasambotra ireo izay efa ananan’ny polisy antontan-taratasim-panenjehana mbola anaty famotorana fa anisan’ny nandray anjara tamin’ireo fanafihana mitam-piadiana nisesy farany teto an-dRenivohitra izy ireo”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny fikarohana heloka bevava eo anivon’ny polisim-pirenena (SCAC), ny commissaire principal de police, i Seraly Hercule.
Fanafihana efa voaomana mialoha…
Nohamafisin’ny lehiben’ny SCAC hatrany fa ry zalahy ireto no tompon’antoka tamin’ny fanafihana ny Galana Anony, ny fanafihana sinoa teny Masay, ny fanafihana trano teny Androhibe, ny fanafihana ny Mada Trade Ambohimanarina, ny fanafihana teo amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena Anosy, ny volana febroary sy marsa lasa teo. “Niaiky izy ireo fa nandray anjara tamin’ny fanafihana ny fiaraben’ny Brinks teny By-Pass ary efa voaomana mialoha iny fanafihana iny, araka ny fitantaran’ireo jiolahy hatrany. Efa tao anaty fiaran’ny Brinks ny iray amin’ireo jiolahy ka afindra amina fiara taxi efa nijanona teny mialoha teny an-toerana ireo volabe nentin’ny Brinks. Nomanina iny fanafihana iny satria efa nisy mpiasan’ny Brinks teo aloha efa niala tamin’ireo jiolahy ireo”, hoy hatrany ny fanazavan’ny lehiben’ny SCAC. Mitovy hatrany ny fomban’ireto jiolahy ireto amin’ny fanafihana mitam-piadiana ataon’izy ireo. Nisy, araka izany, ny firaisana tsikombakomban’izy ireo tamina mpiasa roa lahy efa voaroaka tao amin’ny orinasa Brinks sy polisy iray am-perinasa ary mpamilin’ilay taxi saika hitondrana ny vola. Fantatra fa mbola misy olona dimy hafa nitsoaka ka mpiasan’ny orinasa Brinks efa niala ny iray amin’ireo.